मोबाइल म्यापर १०, पहिलो प्रभाव - Geofumadas
मोबाइल मैपर 10, पहिलो प्रभाव
जुन, 2011 cadastre, Featured, जीपीएस / उपकरण, नवाचारै, पहिलो प्रभाव
पछि खरिद ट्रिमबल द्वारा एश्टेकबाट, स्पेक्ट्राले मोबाइल म्यापर उत्पादनहरूलाई प्रमोट गर्न शुरू गर्यो। यी मध्ये सब भन्दा सरल मोबाइल म्यापर १० हो, जुन म यस समयमा एक नजर लिन चाहन्छु।
मोबाइल मेपर प्रो, सी सी र सीएक्स संस्करणहरू त्यहाँ समाप्त भए तापनि पछि अझै बजारमा छ; ब्लेड प्रविधिबाट राम्ररी ज्ञात गरिएको थियो मोबाइल मैपर 6, जुन हामी अहिले प्रस्तुत गर्दै छौं योको पूर्ववर्ती हो। लाइन फरक छ, किनभने एक MM6 अपरेटिंग प्रणाली को मामला मा नयाँ प्रविधिको बावजुद, ग्रहणशीलता को मामला मा मोबाइल म्यापर प्रो भन्दा बढी छैन, त्यो सी / ए कोड र वाहक चरण पढ्नको क्षमता संग एक धेरै राम्रो रिसीभर थियो। पोष्ट प्रोसेसिंग मानक थियो र राम्रो ह्यागलि with्गको साथ यसको अन्तिम लागत पोस्ट प्रोसेसिंगको साथ १,२०० डलर जति थियो। जबकि MM1,200 ले अझै सी / ए कोड पढ्छ र टेक्नोलोजीसँग (सफ्टवेयर स्तरमा, रिसेप्शन होइन) यसले c० सेमी पोस्ट प्रोसेसिंगको प्रबन्ध गर्छ; जबसम्म पोष्ट प्रोसेसिंग सक्रिय हुन्छ, तर यो विकल्पको लागि अतिरिक्त $ 10 लागत आउँछ, त्यो हो, यो १, 50 ०० को रूपमा आउँछ।
मोबाइल मैपर 10 मोबाइल म्यापर6बाट कसरी भिन्न छ
सामान्यतया भिन्नताहरू महत्त्वपूर्ण छन्। डिजाईनका सर्तहरूमा, MM10 अग्लो, फराकिलो, तर अझ संकुचित छ; ठाउँको राम्रो वितरणको साथ; हामीलाई कहिले थाहा थिएन कि शीर्ष माथिको ब्रुयलर प्यान के हो। यससँग टुप्पोमा रबर बम्पहरू छन् जुन एक हातले यसलाई चलाउन सजिलो बनाउँदछ।
तल्लो बक्सले हरियो पक्षलाई देखाउँदछ जसले MM10 को तुलनामा मोबाइल म्यापरलाई १० अधिक सम्भावना दिन्छ र रातोमा चिह्नित गरिएका नकारात्मक भिन्नताहरू हुन् जुन परिवर्तनको अनुहारमा अपरिहार्य छन्। के हुन्छ भनेर देखाउन म स्तम्भ पनि राख्दै छु मोबाइल मैपर 100जसको मैले मैले बोलेँ।
मोबाइल मैपर6मोबाइल मैपर 10 मोबाइल मैपर 100
तारामण्डलहरू जीपीएस, एसबीएएस जीपीएस जीपीएस, ग्लोनास, एसएबीएस
च्यानलहरु 12 20 45
आवृत्ति L1 L1 L1, L2
अद्यावधिक गर्नुहोस् 1 हर्ट्ज 1 हर्ट्ज 0.05 सेकेन्ड
डेटा ढाँचा NMEA NMEA RTCM 3.1, ATOM, सीएमआर (+), NMEA
यसले आधारको रूपमा काम गर्न सक्छ no no Si
वास्तविक समय एसबीएएस मोडमा प्रेसिजन 1 -2Mts। 1 -2Mts। cm० सेमी भन्दा कम .. SBAS मा, cm० सेमी भन्दा कम। DGPS मा।
सटीकता पश्चात पोस्ट गर्नुहोस् कम्तिमा एक मीटर 50 सेन्टिमिटर भन्दा कम 1 सेमी।
प्रोसेसर 400 Mhz 600 Mhz 806 मेगाहर्ट्ज
अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज मोबाइल 6.1 विन्डोज मोबाइल 6.5 विन्डोज मोबाइल 6.5
Comunicación ब्लुटुथ, USB ब्लुटुथ, USB, जीएसएम / जीपीआरएस, वाईफाई जीएसएम / जीपीआरएस, बीटी, WLAN
आकार 14.6 x 6.4 x 2.9 सेमी 16.9 एक्स 8.8 एक्स 2.5 सेमी 19 x9x 4.33 सेमी
वजन 224 ग्राम 380 ब्याट्रीको साथमा 648 ग्राम
स्क्रिन 2.7 « 3.5 « 3.5 «
मेमोरी 64MB SDRAM, 128 एमबी फ्लैश, एसडी मेमोरी 128 MB SDRAM, 256 MB NAND, Micro SDHC मेमोरी सम्म 8GB सम्म २256 एमबी एसडीआरएएम / २ जीबी नान्ड, माइक्रो एसडीएचसी
न्यूनतम तापमान -20 C -10 C -20 C
अधिकतम तापमान + 60 सी + 60 सी + 60 सी
समर्थन र कम्पन छोड्नुहोस् 1 मेट्रो कंक्रीटमा 1.20 मिटर कंक्रीटमा 1.20 मीटर, अधिक मानक ETS300 019 र मिल- STD-810
ब्याट्री एक जोडा ए.ए. लिथियम / अवधि सम्म 20 घण्टा सम्म लिथियम / अवधि सम्म 8 घण्टा सम्म
एन्टेनाको प्रकार आन्तरिक / बाह्य आन्तरिक / बाह्य आन्तरिक / बाह्य
पर्याप्त सुधार ब्याट्रीमा छ, AA जोडीको सट्टामा यसले लिथियम ब्याट्री २० घण्टासम्म स्वायत्तताका साथ ल्याउँदछ; खराब छैन किनकि 20 घण्टा दिनमा लगभग तीन दिन काम गर्ने गर्दछ। यो पक्कै पनि यसलाई संकुचित हुन मद्दत गर्‍यो।
यो पोष्ट प्रोसेसिंग बिना परिशुद्धतामा सुधार हुँदैन, यो लगभग २ मिटर मुनि रेडियल प्रेसिजनको साथ एक ब्राउजर हो। तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि यो एक मात्र फ्रिक्वेन्सी भएको उपकरण हो, यसले RTK लाई समर्थन गर्दैन। तर तिनीहरूलाई पोष्ट प्रोसेसिंग गर्दा डाटाको शुद्धतामा MM2 को तुलनामा सुधार हुन्छ जुन survey० सेमीभन्दा कम हुन सक्छ, जुन ग्रामीण सर्वेक्षणमा परम्परागत ओर्थोफोटोको पिक्सेलको बराबर हो।
हामी मान्छौं यो प्रेसिजन पुगेको छ किनकि यसको २० वटा च्यानल (जीपीएस L20 C / A र SBAS मोडमा: WAAS / EGNOS / MSAS) को दायरा छ। थप रूपमा, यो बुझिन्छ कि पोष्ट-प्रोसेसिंग GPRS वा Wifi को माध्यमबाट टाढाको आधारमा गर्न सकिन्छ।
यसले विन्डोज मोबाइलको अझ नयाँ संस्करण ल्याउँछ, प्रोसेसर सुधार भएको छ (यो एक ARM9 हो) तर सफ्टवेयरको स्तरमा यसले उही ल्याउँछ: विन्डोज मोबाइल। सिंक र इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर सक्रिय गर्नुहोस्। मोबाइल म्यापर फिल्ड समावेश गरिएको छ, जुन केहि सुधारको साथ मोबाइल म्यापि ;को समान छ; यद्यपि यसले आर्कप्याडलाई पनि समर्थन गर्दछ यद्यपि यो इजाजतपत्र केवल संयुक्त राज्य अमेरिकामा किन्न सकिन्छ।
साथै मेमोरीमा ठूलो क्षमता छ, 256 एमबी न्यान्ड (गैर-अस्थायी फ्लैश) ल्याउँछ, अहिले सम्म XSUMX GB लाई MicroSD लाई समर्थन गर्दछ।
अतिरिक्तको रूपमा तपाईं यसलाई पोलमा झुन्ड्याउन बाहिरी एन्टेना र र्याकेट किन्न सक्नुहुन्छ। पोस्ट प्रोसेसिंग विकल्प सक्रिय गर्न, एक सक्रिय कुञ्जी तिर्नु पर्छ।
यसको मूल्यको लागि, जुन US $ १1,500०० भन्दा कम छ, यो खराब देखिँदैन। यद्यपि मेरो विचारमा यो जीपीएस र जीआईएस क्षमताहरूको पकेट मात्र हो।
यो ग्रामीण क्याडस्ट्र, वन, वातावरणीय परियोजनाहरू वा ती हुन् जहाँ ision० सेन्टिमिटर शुद्धता पर्याप्त छ। यो स्पष्ट छ, तपाईले GIS को फाइदा लिनुपर्नेछ, किनकि यसले तपाईलाई रेखा, बहुभुजा वा पोइन्टर्सको लेयरहरू बढाउन अनुमति दिन्छ जुन हामी चाहान्छौं विशेषताको मात्रासँग, फोटोग्राफ र अडियो सहित।
यदि हामी gvSIG मोबाइल प्रयोग गर्छौं भने के हुन्छ भने हामी सोचेको छ कि सरल मोबाइल मेपर फील्ड भन्दा बढी केहि चीजहरू फेला पार्नका लागि।
मोबाइल म्यापर 100 बाट यो सेट गर्दछ
निस्सन्देह, मोबाइल म्यापर 10 एक टच हो जब यो ट्वीटर हुन्छ मोबाइल मैपर 100। यो १ सेन्टीमिटर पोष्ट प्रोसेसिंग सटीकको साथ उपकरणको अर्को स्तर हो, यद्यपि यो अझै एक फ्रिक्वेन्सी हो।
शायद MM10 को सबै भन्दा ठूलो हानि हो कि यो स्केलेबल छैन, यो यसको लागि डिजाइन गरिएको उद्देश्यहरूका लागि पुग्छ।
अर्को तर्फ, मोबाइल म्यापर १०० लाई मापन गर्न सकिन्छ। बाह्य एन्टेना र केहि कन्फिगरेसनको साथ यो एक प्रोमार्क १०० बन्न सक्छ, प्रोमार्क २०० मा केहि अरूसँग जुन पहिले नै दोहोरो फ्रिक्वेन्सी समर्थन गर्दछ।
यद्यपि आवास बाहिर बाहिर एकै छ।
हामी अर्को पोस्टमा तुलना तुलना गर्नेछौं।
यहाँ तपाई यी उत्पादनहरूको प्रतिनिधि पाउन सक्नुहुन्छ।
यहाँ तपाईं Ashtech उत्पादनहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
जीपीएस मेरो पहिलो प्रभाव
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो आईप्याडको अर्को पक्ष
अर्को पोस्ट अनलाइन स्टोर कसरी सेट अप गर्ने?अर्को »
१ Mobile जवाफ "मोबाइल म्यापर १०, पहिलो प्रभाव" लाई
मलाई लाग्छ कि तपाइँ स्थानीय वितरकसँग जाँच गर्नुपर्छ।
रोबर्टो जीवी भन्छिन्:
म तपाईलाई मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ म एक जीपीएस मोबाईलमा म्यापेर 10 छ, र म बाह्य एन्टेना किन्न चाहन्छु, मेरो प्रश्न कस्तो प्रकारको ऐन्टेना किन्न र कस्तो प्रकारको सहायक धेरै राम्रो काम गर्न
प्रयोग गुगल किनमेल मूल्य प्रवृत्तको विचार छ
जस्तै नै यो 100 मोबाइल म्याप को आधिकारिक मूल्य हो
माइगेल मोरेनो भन्छिन्:
तपाई यस लेखको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? http://www.abreco.com.mx/gps/postproceso.htm
जनवरी, 2013 बजे
मेरो पोस्ट म्यासेजमा मोबाइल मैपर 10 छ, मैले कुन उपकरणलाई आधार स्टेसनको रूपमा प्राप्त गर्न सक्छु र मैले कस्तो सटीक आशा गर्न सक्छु?
एमएम 10 सफ्टवेयर तिनीहरू एक भन्दा बढी कम्प्युटरमा स्थापना गर्न सकिन्छ?
त्यो तपाइँ कहाँ हुनुहुन्छ देशमा निर्भर गर्दछ। सब भन्दा व्यवहार्य एक स्थानीय Topcon / Magellan वितरकको साथ हो
कसलाई आईटी चासो गर्न सक्नेछ: म कहाँ सामान MM6 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस AT 100% प्रयोगको लागि पूर्ण पुस्तिका।
म तपाईबाट छुट्याउन नदिनु भएको छ भने तपाईलाई असहयोग नगर्नुस्, समाचार को लागी बिर्सने बित्तिकै क्षमा गर्नुहोस्।
नमस्ते, धेरै राम्रो
म जियोफुमाडस वेबसाइटमा खोज्दै छु तर मैले खोजेको कुरा मैले फेला पारेको छैन, त्यसैले मैले तपाईंलाई सिधै सोध्ने निर्णय गरेको छु: तपाईंसँग के कुनै गाईडहरू / म्यानुअल छन् वा तपाईंलाई कुनै ठाँउ थाहा छ जहाँ म यसलाई टीममा काम गर्न डाउनलोड गर्न सक्छु? ashtech मोबाइलमेपर 10 »। मलाई थाहा छ कि यो प्रश्न धेरै नै विस्तृत छ, तर जे पनि तपाईंले टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ, म यसको कदर गर्छु। 100 संस्करणको उपयोगकर्ता पुस्तिका 10 को लागी मान्य हुनेछ? यो केवल एक मात्र मैले तपाईंको वेबसाइटमा देखेको छु। मैले एश्च वेबसाइट भ्रमण गरेको छु र धेरै देखेको छैन। मैले अफिस प्याकेज पुस्तिका मात्र पाएँ।
म्यापर १० छ तर म २at निर्देशांकको साथ नेट २ 10 प्रणाली कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर फेला पार्न सक्दिन, केवल अक्षांश र देशान्तर देखा पर्दछ र मलाई "x" र "Y" र "Z" चाहिन्छ।
तपाईंले मोबाइल मैपर कार्यालय प्रयोग गर्नुपर्दछ, जुन तपाई ASHTECH पृष्ठबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंले मोबाइल म्यापिङलाई भ्रमित गर्नु हुँदैन जुन मोबाइल म्याप अफिस सफ्टवेयरको साथमा त्यो टोली ल्याएको सफ्टवेयर।
मैले मोबाइल मैपर6भाडामा लिएको छु। क्या कसैलाई थाहा छ कि mmw फाईलहरू (मार्गवर्णनहरू) अन्य GIS ढाँचाहरूमा परिवर्तित हुन्छन्? यसले मलाई मोबाइल मेपर अफिसको साथ विकल्प दिदैन
एक छडी 🙂
बिल्डर एल्भरेज सीिसनेरोस भन्छिन्:
मसँग Mexican 35 मेक्सिकन पेसोहरू छन् र यदि मसँग सटीक आवश्यक छ भने, म शहरी योजना बनाउने कार्य गर्दछु ... कि तपाईलाई सुझाव गर्नुहोस् कि म यो रकमबाट किन्छु ... कृपया मलाई उद्धरण पठाउनुहोस्
अब त्यो एक Trimble उद्धरण गर्छ, यदि मेरो 1500 डलरको बजेट छ भने, म मोबाइल मेपर वा ट्रिमबुल जूनो को सिफारिश गर्नेछु? सटीकता, विश्वसनीयता, नेभिगेसन, गिनिस, सान्त्वनाको लागि।
जुनो धेरै राम्रो छ। पोष्ट प्रोसेसिंगको साथमा अशुद्धता सबवेको वरिपरि हुन्छ, पोष्ट प्रोसेसिंग नगरी यो नेभिगेटर हो 2.50 माथिको सटीकसँग।
क्षेत्रीय कार्यको लागि Trimble जूनो एसबी कसरी? मलाई सेटिमिट्रिक परिशुद्धता आवश्यक छैन